Izindaba - Kusukela ngoSepthemba 1, iChina izothatha isikweletu esihlangene kanye nesiningi sokuthola izinhlayiya zepulasitiki ezenziwe kabusha ezisuka eChina
Eminyakeni emibili edlule, kuye kwaqaliswa izinqubomgomo zokuhlelwa kwemfucuza yasekhaya, kwavuselelwa kabusha imfucuza kanye nokusebenzisa kabusha emuva.
Kusasa wusuku olusemthethweni lokunikezelwa komthetho omusha nomdala "wemfucuza eqinile". Kusukela kusasa, kuzobhalwa kabusha iphethini yokungenisa kabusha amapulasitiki. Ngokuzayo, ukugaywa kwemfucuza eChina kuzoba umkhuba ojwayelekile!
Njengamanje, ukumiswa kokungeniswa kwezinhlayiya zepulasitiki ezenziwe kabusha yizinkampani ezithile zemikhumbi sekuqubule ingxoxo ebanzi embonini. Iphuzu eliyinhloko ukuthi bazothwala isikweletu esihlanganisiwe nesiningana sokuthola izinhlayiya zepulasitiki ezenziwe kabusha ezivela ezweni laseChina.
Izinkampani ezinamabhizinisi afanele zizoshintsha izinkampani zazo zokuthumela. Kodwa-ke, ngabe isimo sengqondo sezinkampani ezinkulu zemikhumbi sizothinta izinkampani zokuthumela ukulandela? Kusaziwa namanje.
Ukuthunyelwa kweCOSCO eNyakatho Melika kumemezele ukuthi kuzoyeka ukwamukela imfucuza eqinile ethunyelwe ezweni laseChina kusuka ngoSepthemba 1. Kuyaqondakala ukuthi izidingo zisebenza kuzo zonke izimpahla eziqinile, ezibandakanya iphepha lodoti, insimbi kadoti, amapulasitiki kadoti, izindwangu ezilahlayo, amakhemikhali amdaka , njll.
Kusukela ukuvinjelwa kukadoti, ukulungiswa kwenqubomgomo yokungenisa kanye namazinga ahlanganisiwe ezinhlayiya zepulasitiki ezenziwe kabusha sekuhehe imboni.
Ezinye izincazelo zemfucuza zihambisana nokwamukelwa komngcele, kepha izinhlayiya nazo azivunyelwe, okudala umbuzo wokunqanda ukungeniswa kwezinhlayiya zepulasitiki ezenziwe kabusha.
Njengoba "umthetho kadoti oqinile" omusha usho ngokusobala ukuthi umbuso uzobona kancane kancane ukungeniswa kukadoti oqinile, wengeze isijeziso semfucumfucu eqinile engekho emthethweni, futhi ikwenza kucace ukuthi ophethe kanye nomngenisi wezwe bazothwala icala ngokuhlanganyela kanye nezimbalwa (ezinye izenzo ezingekho emthethweni angahlawuliswa ngaphezu kwama-yuan angama-500000 nangaphansi kwama-yuan angama-5000000), umthetho omusha wokungcola okuqinile uzoqala ukusebenza ngoSepthemba 1, 2020.
Kuthintwe yilokhu, izinkampani zokuthumela zikhathazekile noma zizobophezeleka ngokuhlanganyela nangokuzimisele. Njengamanje, yiCOSCO Shipping Company kuphela ezwile isitatimende esikhishwe yiCOSCO Shipping. Njengamanje, iSinotrans, Yangming, evergreen, eyodwa, i-CMA nezinye izinkampani ezinkulu zemikhumbi zingenisa izinhlayiya zepulasitiki ezenziwe kabusha, kepha amabhizinisi anjalo awenzanga izitatimende ezifanele.
Kumele kuqashelwe ukuthi njengomkhiqizo ophelile, izinhlayiya ezenziwe kabusha aziyona imfucumfucu eqinile.
Umkhuba wakusasa uzoba ukuthi ngokuqaliswa komthetho omusha "wemfucumfucu eqinile", izinhlayiya ezingenisiwe ezisezingeni eliphansi zizokhishwa kancane kancane ezweni, futhi izinhlayiya ezisezingeni eliphakeme ezingenisiwe zizoba umthombo omkhulu.
Kepha manje, ngenxa yeqiniso lokuthi ayikho indinganiso kazwelonke ebumbene yokungeniswa kwezinhlayiya zepulasitiki ezenziwe kabusha, umphathi webhizinisi lokungenisa nokuthekelisa phesheya kwezilwandle kusadingeka aqaphele.
Lokhu okulandelayo yizindaba ezidinga ukunakekelwa kwamabhizinisi wokungenisa ama-granule Enterprises:
1. Kuyadingeka ukuba nomuzwa wobungozi futhi ube nokuqonda okuphelele kwezimpahla, ikakhulukazi lezo ezinobungozi obukhulu bokungenisa, njengezakhiwo, imininingwane, imibala kanye nezinto eziyinhloko zezinto ezenziwe kabusha;
2. Uma kukhona ukungabaza ngohlobo lwezimpahla, amasiko kufanele aqale axhumane ne-ejensi yokuhlola efanele;
3. Lapho amasiko ephakamisa umbuzo futhi ethumela amasampula kwizinhlangano zokuhlonza ukuze zihlonzwe, kuyadingeka ukubheka ukubaluleka okukhulu ekubambisaneni nomsebenzi wesampula ukuze kutholwe izibonelo ezilinganiselwe nezizwakalayo;
4. Uma kunempikiswano yezomthetho, inhlawulo yezokuphatha noma ukwehliswa kokulinganiswa kwesikweletu, kuphakanyiswa ukuthi uthintane nommeli kuqala bese ubhekana naso ngokuya ngesimo esithile. Uma kunesidingo, kuyadingeka ukuthi kuvikelwe amalungelo asemthethweni kanye nezintshisekelo zawo ngokucutshungulwa kabusha kwezokuphatha kanye namacala okuphatha.